प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने को हुन् यी महिला ? « हाम्रो ईकोनोमी
प्रधानमन्त्रीलाई मिर्गौला दिने को हुन् यी महिला ?
दुई हप्ताअघि अञ्जान घिमिरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेकी थिइन् । केपीका गाला सुन्निएर पुक्क भएका थिए । तर, हाउभाउले कत्ति पनि बिरामी देखिँदैनथे । चश्माको छेकोबाट हेर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे,
‘नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेकी छ्यौ ?’
अञ्जानले ‘अँ’ भन्ने भावमा टाउको हल्लाइन्
एकछिनपछि फेरि प्रधानमन्त्री बोले, ‘तिमी चिन्ता नगर । अझ दुई/तीन वर्ष छोरीकै मिर्गौलामा बाँच्छु म ।’
अञ्जान नाताले प्रधानमन्त्री ओलीकी भाइबुहारी हुन् । तर, ओली जहिल्यै माया गरेर ‘छोरी’ भन्छन् ।
उता, डाक्टरलाई सुन्दाखेरि बाँच्नका लागि केपी ओलीसँग अब मात्र दुई विकल्प छन् – कि मिर्गौला पुनःप्रत्यारोपण या नियमित होमोडायलायसिस् । यता अञ्जान सुनाउँछिन्- खुसी र आँसुले कुँदिएको मिर्गौलाको गीत । अथवा कविता, कथा, फिल्म, उपन्यास जे भन्नुस् ।
उस्तै गीत छ, अञ्जान घिमिरेसँग । १२ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओली अञ्जानकै मिर्गौलामा बाँचिरहेछन् । योभन्दा मिर्गौलाको सुन्दर गीत अर्को के हुन सक्छ ?
केपी शर्मा ओली बैंककबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर फर्किएका थिए । ‘हालखबर कस्तो छ ?’, परिवारका सदस्यलाई चासो हुने नै भयो । भाइ ताराप्रसाद वली र बुहारी अञ्जान बालकोट पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । दिनको समय । बाहिर घाम लागेको थियो । केपी ओलीले भने अन्धकार कथा सुनाए, ‘दुबै मिर्गौलाले काम नगर्ने भयो ।’
ला… ! अञ्जानलाई औडाहा भयो ।
मैले बचाउन पो सक्छु कि ! उत्तिखेरै अञ्जानको दिमागले यत्ति सोच्यो ।
अञ्जानको जिद्दीका अगाडि केपी ओलीको अडान पनि काम लागेन । ओलीले भने, ‘उसोभए श्रीमान, आमा, बाबासँग सल्लाह गर ।’
‘जेठाजुलाई मिर्गौला प्रदान गर्न यति धेरै केले हौसला प्रदान गर्‍यो ?’
भित्तामा टाँसेको केपी ओलीको फोटो हेर्दै हामीले सोध्यौं ।
बोर्डिङको तलब कति नै हुन्छ र ?
अञ्जानले पढाउन छाडिन् । किराना पसलको क्षेत्रफल बढाइन् ।
त्यसपछि पनि केपी ओलीसँग पटक-पटक भेट भयो अञ्जानको । उनले प्रायः परिवारसहित बोलाउँछन् । र, जहिल्यै भेट्ने वित्तिकै ओली प्रश्न गरिहाल्छन्,
‘स्वास्थ्य जाँच नियमित छ ?’
घर्‍याक्क ढोका उघि्रयो । अञ्जानका श्रीमान आइपुगेछन् ।
अचेल श्रीमानले विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालन गर्छन् । घडीले साँझको सात बजाएको छ । यति नै बेला हो श्रीमान घर र्फकने ।
अञ्जानले भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेकी छिन्, ‘भगवान ! अझै मेरै मिर्गौलाले काम गरोस् । रफ्तारमा काम गर्नेबेला बिरामी भएर अल्झन नपरोस् ।’